YANGON FREE MASTERCLASSES - Yangon Photo Festival
YANGON FREE MASTERCLASSES
YPF – YANGON PHOTOGRAPHY CLASSES
We are glad to announce the masterclasses which will take part in Yangon as part of the 8th Yangon Photo Festival
အဌမအကြိမ်ရန်ကုန်ဓါတ်ပုံပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံသင်တန်းများကို မကြာမီ ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Basics Photography Class
By Kyi Myint
Feb 8-13 Yangon
This workshop will explore the basics and ethics of photography.
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈-၁၃၊ ရန်ကုန်
Free introductory documentary class (Burmese)
Yangon: Feb 15-19, 2016
As part of the 8th Yangon Photo Festival,aworkshop designed by photojournalists and documentary photographers AungPyae, MinZayar and Pyay Kyaw Myint for all those who are fond of documentary photography but need to learn technical skills. The best participants will be able to attend the following advanced workshop.
InstitutFrançais de Birmanie, 340, Pyay Road, SanchaungTsp
အခမဲ့ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှုမိတ်ဆက်သင်တန်း (မြန်မာဘာသာဖြင့်)
ရန်ကုန်မြို့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅-၁၉ ၂၀၁၆
အဌမအကြိမ်ရန်ကုန်ဓါတ်ပုံပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှုနည်းပညာအခြေခံနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ (Documentary Photography)အကြောင်းကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်နှင့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံဆရာများဖြစ်ကြတဲ့အောင်ပြည့်၊မင်းဇေယျာ၊ပြေကျော်မြင့် နဲ့မေကိုနိုင်တို့မှစီစဉ်ရေးဆွဲသောသင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ဤသင်တန်းမှထူးချွန်သင်တန်းသားများမှာအဆင့်မြင့်သင်တန်းသို့တက်ရောက်ခွင့်ရပါမည်။
Yangon: Feb 22- 29, 2016
As part of the 8th Yangon Photo Festival, French photojournalist Christophe Loviny, assisted by photographers Minzayar,Pyay Kyaw Myint and MaycoNaing has designed this full-time intensive 8 days masterclass for those who would like to study or work in the media. It will help you to expand your professional skills by creatinganarrative photo-story ready to be published on internet or inajournal.
The best works will be shown to the public on March 19, 2016 during the 8th Yangon Photo Festival at the French Institute in Yangon. Prizes, including professional Canon SLR cameras and trips to France to study photography will be awarded byajury presided by DawAung San SuuKyi.
Candidates will be selected on Feb 20 2016, based on their motivation and ideas for the photo-essays (bring your portfolio onamemory stick).
InstitutFrançais de Birmanie, 340 Pyay Road, Sanchaung Tsp.
အခမဲ့အဆင့်မြင့်သင်တန်း – မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံပညာ (အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့်)
ရန်ကုန်မြို့ - ဖေဖ်ာဝါရီ ၂၂-၂၉ ၂၀၁၆
အဌမအကြိမ်ရန်ကုန်ဓါတ်ပုံပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုလေ့လာချင်သူများသို့ မဟုတ် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသောဤအချိန်ပြည့်သင်တန်းကို ပြင်သစ် ဓါတ်ပုံဆရာ Christophe Loviny ၊မြန်မာဓါတ်ပုံဆရာများဖြစ်ကြသောမင်းဇေယျာ၊ပြေကျော်မြင့် နှင့် မေကိုနိုင် တို့ မှ ကူညီသင်ကြားပေးပါမည်။ သင်တန်းပုံစံမှာအင်တာနက် သို့ ဂျာနယ်များတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြနိုင်သည့် photo-essay ခေါ် ဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်းများကိုဆရာများ၏ အကူအညီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရုိုက်ကူးရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းသားရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါ၍ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရက် ၂၀၁၆ နေ့ တွင် ဓါတ်ပုံအက်ဆေးရိုက်ကူးမှု၌ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်ခြင်းတို့ အပေါ်တွင်မူတည်၍ ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (လျှောက်ထားသူများမှ portfolio အဖြစ်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံများအား memory stick ဖြင့်ယူဆောင်လာရန်)
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန၊ ၃၄၀၊ပြည်လမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။
ပြေကျော်မြင့်၊ pyaykyawmyint@gmail.com၊ ၀၉၅၀၁၉၂၃၉သို့ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။